Santiment စျေး - အွန်လိုင်း SAN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Santiment (SAN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Santiment (SAN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Santiment ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $10 489 968.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Santiment တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Santiment များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
SantimentSAN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.158SantimentSAN သို့ ယူရိုEUR€0.135SantimentSAN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.121SantimentSAN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.145SantimentSAN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.42SantimentSAN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1SantimentSAN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.53SantimentSAN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.593SantimentSAN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.211SantimentSAN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.221SantimentSAN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.55SantimentSAN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.23SantimentSAN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.868SantimentSAN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹11.84SantimentSAN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.26.73SantimentSAN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.217SantimentSAN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.239SantimentSAN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿4.92SantimentSAN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.1SantimentSAN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥16.79SantimentSAN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩187.37SantimentSAN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦61.32SantimentSAN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽11.62SantimentSAN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.38
SantimentSAN သို့ BitcoinBTC0.00001 SantimentSAN သို့ EthereumETH0.000402 SantimentSAN သို့ LitecoinLTC0.00271 SantimentSAN သို့ DigitalCashDASH0.00166 SantimentSAN သို့ MoneroXMR0.00169 SantimentSAN သို့ NxtNXT11.94 SantimentSAN သို့ Ethereum ClassicETC0.0225 SantimentSAN သို့ DogecoinDOGE44.39 SantimentSAN သို့ ZCashZEC0.00181 SantimentSAN သို့ BitsharesBTS5.82 SantimentSAN သို့ DigiByteDGB5.12 SantimentSAN သို့ RippleXRP0.527 SantimentSAN သို့ BitcoinDarkBTCD0.00533 SantimentSAN သို့ PeerCoinPPC0.51 SantimentSAN သို့ CraigsCoinCRAIG70.43 SantimentSAN သို့ BitstakeXBS6.59 SantimentSAN သို့ PayCoinXPY2.7 SantimentSAN သို့ ProsperCoinPRC19.39 SantimentSAN သို့ YbCoinYBC0.00008 SantimentSAN သို့ DarkKushDANK49.56 SantimentSAN သို့ GiveCoinGIVE334.52 SantimentSAN သို့ KoboCoinKOBO35.21 SantimentSAN သို့ DarkTokenDT0.146 SantimentSAN သို့ CETUS CoinCETI446.02